Somaliland: Golaha Wakiilada Oo Saaka Lagu Balansanyahay Iyo Car Iyo Wir Ay Labada Garab Isla Hortagayaan - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Golaha Wakiilada Oo Saaka Lagu Balansanyahay Iyo Car Iyo Wir Ay...
Labada garab ee golaha wakiilada ee isku maandhaafsan natiijadii doorashadii shirguddoonka golaha wakiilada, ayaa saaka isugu imanaya xarunta golaha iyagoo si weyn u kala aragti fog, waxaanay isula imanayaan car iyo wir uu midiba midka kale ugu hanjabayo.
Garabka Guddoomiye Baashe ayaa iclaamiyay in saaka la dooran doono guddoomiye-xigeenka golaha wakiilada oo ah booskii uu isagu baneeyay. Laakiin garabka Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ayaa shirjaraa’id oo ay xalay qabteen waxa ay kaga digeen halis saaka ka dhalan karta fadhigaas, waxaanay ku baaqeen in golahaas la badbaadiyo si aanu murug u dhicin. Waxay ku eedeeyeen garabka kale inay diideen in la wada hadlo islamarkaana ay ka baxeen balamo la isugu keenayay oo la qabtay.
Garabka guddoomiye Baashe ayaa iyaguna ku adkaysanaya in fadhigu sidiisa u furmi doono islamarkaana lagu dooran doono guddoomiye-xigeenka golaha wakiilada.
Geesta kale xoghayaha golaha wakiilad Somaliland ayaa shalay ku dhawaaqay liiska 11 xildhibaan oo u tartamaaya kursiga guddoomiye ku xigeenka 1aad ee golaha wakiilada oo uu baneeyay Baashe Maxamed Faarax.
Waxa uu sheegay in fadhiga maanta lagu dooran doono gudoomiye-xigeenka 1aad ee golahaas, waxaana u tartamaya 11 xildhibaan oo murashaxnimadooda gudbiyay, kuwaas oo kala ah:
1. Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle,
2. Xildhibaan Axmed Cabdi Kaahin,
3. Xildhibaan Maxamuud Dhuunkaal Guutaale,
4. Xildhibaan Saleebaan Cabdi Cawad Bukhaari,
5. Xildhibaan Xasan Muuse Hufane,
6. Xildhibaan Cabdilaahi Axmed Yuusuf Madar,
7. Xildhibaan Maxamed Cumar Jiir,
8. Xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa,
9. Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble,
10. Xildhibaan Maxamuud Axmed Obsiiye
11. iyo Xildhibaan Maxamed Baaruud Shide”
Somaliland: Wasiir Xukuumadda Muuse Biixi Oo Ka Tirsan Oo Ka Gubtay Dhaliishi Ex Wasiir Oday Cadaami.
Somaliland: “Hooyo Guryahayagii Daad Baa Galay Meel Aan Maanta dhaxanta iyo roobabka ka galno ma jirto roobkaa naga dumiyay dawladana cid ka socotaa noomay imaan Oo Namay Soo Eegin”Hooyo Caasha Axmed